Guddoomiye Cumar Filish oo shaaciyay waqtiga la furayo wadooyinka xiran - Awdinle Online
Guddoomiye Cumar Filish oo shaaciyay waqtiga la furayo wadooyinka xiran
Guddoomiyaha Maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa shaaciyay qorshooyin uu wado Maamulka gobolka, kaas oo lagu furayo wadooyinka xiran oo ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan Shacabka ku nool Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in wadooyinka xiran ay sababeen in badeecadaha qaarkood ay haleebaan, hayeeshee ay keentay duruufo amni oo loo xiray wadooyinka, isaga oo sheegay in wadooyinka dib loo furi doono.
Guddoomiyaha Cumar Filish waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Mudada sanadka ka badan ee uu xilka haayo uu Madaxda sare ee dalka ku cadaadinayay in wadooyinka la furo ,isla markaana uu rajeynayo in todobaad gudihiis lagu furo.
Hadalka Guddoomiyaha Maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xalay qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho dhagxaantii ku xirneyd laga qaaday, balse wadooyin kale lagu sii xiray.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Amiirka iyo shacabka dalka Kuwait la wadaagay..
Next articleCiidammada dowladda oo Shabaab kala wareegay tuulo istiraatiiji ah